यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (भदौ १८ गते बुधबार)::Leading Nepal News
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (भदौ १८ गते बुधबार)
आज वि.सं. २०७६ साल भदौ १८ गते बुधबार, तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर ०४ तारिख
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज प्रयत्न गर्दा व्यावसायिक काम सम्पादन हुनेछन् ।कामको चाप र थकाइबाट मुक्त रही विश्राम पाइनेछ । आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ । विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ । परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ । मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । परिवारका सदस्यहरूसँग आत्मीयभावमा बृद्धि हुनेछ । प्रेमसम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदाको योग छ । आम्दानी बढ्ने र फाइदा उठाउने समय छ । वैदेशिक यात्राको प्रकिया अघि बढ्न सक्छ । पुरानो लेनदेन र बाँकीबक्यौताको समस्यालाई हल गरिने छ । कामको चाप बढ्ने छ, तर बेफाइदा हुँदैन । शत्रुपक्ष सक्रिय हुने दिन हो, त्यसैले फाइदाका लागि योजनाहरू गोप्य राख्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी र राज्यपक्षको काममा सफलता मिल्नेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) आज दैनिक कामकाज र बन्दव्यापारमा राम्रै छ । मानप्रतिष्ठा प्राप्तिका प्रयास हुनेछन् । गुरुजन, अभिभावक र साथीभाइले दिएको सल्लाहालाई मान्नु आजका लागि उपयोगी हुनेछ । शुभचिन्तकले दिएको सल्लाहाबमोजिम मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादाका लागि गरेको प्रयास सफल हुनेछ । भावुक र संवेदनशील समय छ, एकान्तमा बस्नुभन्दा कर्मक्षेत्रमा सक्रिय रहनु राम्रो हुन्छ । बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा समय प्रदान गरिने छ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) आज पशुधन र जग्गाजमिनबाट भनेजस्तो लाभ हुनसक्दैन । रोकिएका घरेलु कामकाज सिद्ध्याउन निकै खट्नु पर्ने छ । मान्यजनको सुझाव अप्रिय लाग्नेछ । परिवारजनमा पनि असमझदारी बढ्नेछ । परिवारजन तथा बन्धुबान्धवबीचको दूरी बढ्नेछ । बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीका कारण अपमानित हुनुपर्छ । नयाँ काममा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) आज रोजगारी र व्यापारव्यवसायमा विशेष फाइदाको योग छ । प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन् । आम्दानी बढ्नेछ । कृषिक्षेत्र वा घरपरिवारमा देखिएका चुनौतीको निवारण गरिने छ । दाजुभाइ र बन्धुबान्धवका काममा सहभागी बन्नुपर्ने देखिन्छ । पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ । बोलीको प्रभाव रहनाले काम बन्नेछ, तर्क र विवादमा विजय प्राप्त हुनेछ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) आज मानसम्मान बढ्नेछ भने बोलीको भरमा काम सम्पादन हुने योग छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् । विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । काम र पठन–पाठनमा रुचि जाग्नेछ ।गीत, सङ्गीत र कलाका साधकहरूका लागि आज विशेष महत्त्वको दिन बन्नेछ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) आज नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला मिल्नेछ । अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । लाभमूलक कामको आश्वासन पाइनेछ । पारिवारिक भेटघाटको समय छ । विशेष व्यक्तित्वलाई भेट्ने मौका आउला । स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ । मन धनागमका मार्गको खोजीमा हुनेछ र लक्ष्यप्रति सजग भए कार्यमा सफलता मिल्ने समय छ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) आज मन आलस्य, डर र चिन्ताले जरो गाड्ने छ । दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिने छ । पतिपत्नीबीचको आपसी सम्बन्धमा उतारचढाव ब्यहोर्ने समय हो । व्यवसायमा थप लगानी बढाउन उपयुक्त समय छैन । लामो दूरीको यात्रा र वैदेशिक कामकाजमा पनि भनेजस्तो फाइदा लिन सकिंदैन । बन्दव्यापारमा पनि मन्दी छाउने छ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) आज आर्थिक र व्यवसायिक पक्ष सबल देखिन्छ । व्यापारमा पनि बढी नै फाइदा हुनेछ । विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्नेछन् । परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन् । दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । पढाइमा प्रगति हुनेछ । उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) आज दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सामाजिक कामको दायित्व बढ्नेछ । काममा मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ । व्यापारमा राम्रो फाइदा छ । ज्ञान र बुद्धिको क्षेत्रका सफल भइने छ ।प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुनेछ । नयाँ रोजगारी वा व्यवसायका लागि आजको चिन्तनले काम गर्ने समय छ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) आज पेसागत वा व्यवसायिक उन्नतिका लागि चालेका कदम सफल हुनेछन् । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । व्यापारमा लाभ मिल्नेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ । पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ । आर्थिक पक्ष सबल छ । भाग्य चम्किने समय छ । सामूहिक नेतृत्व सम्हाल्ने मौका मिल्नेछ । घरपरिवारमा खुसीको वातावरण सिर्जना हुनेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) आज कुनै नयाँ काम छ भने हात हाल्न केही समय पर्खंदा राम्रो हुनेछ । परिवारजनको आत्मीयतामा कमी आउने छ । आश्वासन दिएर झुक्याउनेहरूले सताउनेछन्, सचेत रहनुहोला । स्वास्थ्यमा कमजोरी र उपचारमा खर्च हुने योग छ ।सवारीसाधन हाँक्दा सचेत हुनुहोला । अध्ययनमा समय दिन नसकिएला । मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनेछ । फाइदाका लागि योजना गोप्य राख्नुहोला ।